အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, ဖြေရှင်းနည်းများ Access Control Clone Anti-Clone CPU Card Reader, Access Control CPU Card Anti-clone Reader, Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး CPU ကိုကတ် Reader ကို, Access Control CPU Card လုံခြုံရေးစာဖတ်သူ, anti-ကိုယ်ပွား CPU ကိုကတ် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို, Anti-clone CPU Card Access Control Security Reader, မိတ္တူကူးခြင်းတားဆီးခြင်း CPU Card Access Control Reader, CPU Card Anti-clone Reader
Clone access card ၏အပြုအမူကိုထိရောက်စွာတားဆီးရန်အလွန်အမင်းလုံခြုံသော CPU တံခါးကဒ်နှင့် CPU လက်လှမ်းမီစာဖတ်သူကိုသုံးပါ.
ဆက်သွယ်ရေး protocol ကို: က ISO / IEC14443 TypeA
ပံ့ပိုးမှုကဒ်: MF S50 / S70 နှင့်အခြား chip ကိုကတ်များ, ထောက်ခံမှု CPU ကိုကဒ် (ကဏ္ဍအကြောင်းအရာဖတ်နေအထောက်အကူ)
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ: DC က 12V (± 5%)
output format နဲ့: Wiegand 26 သို့မဟုတ် Wiegand 34 (စီမံခန့်ခွဲမှုကဒ်နှင့်အတူ output ကို format ကိုပြောင်းလဲစေ)
induction အကွာအဝေး: 30~ 100mm
Card ကိုစာဖတ်ခြင်းအချိန်: <200ဒေါ်
transmission အကွာအဝေး: 100 မီတာ
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -10℃ ~ + 60 ℃
အလုပ်လုပ်စိုထိုင်းဆ: <90% Non-condensing
Shell ကအရောင်: ငွေအနယ်စပ်, အနက်ရောင် panel က
ရှုထောင့်: 86× 86 × 23mm
KR350M ပုံစံ CPU ကတ်ပြားကူးယူခြင်းထိန်းချုပ်မှုထိန်းချုပ်မှုကဒ်ဖတ်စက်သည် ၁၃.၅၆ MHz အဆက်အသွယ်မရှိသော RF IC ကဒ်နှင့် CPU ကဒ်ပေါင်းစပ်ထားသောကဒ်ဖတ်စက်. ၎င်းသည် ISO / IEC14443A အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းမီ protocol ကို အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ထားသောအဆက်အသွယ်မရှိသော smart card reader ဖြစ်သည်. Seabreeze Smart Card ကုမ္ပဏီမှဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းအပိုင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောရေဒီယိုလှိုင်းကဒ်ဖတ်စက်ကိုအသုံးပြုသည်. အဓိကအားဖြင့် IC access control cards ကထုတ်လုပ်သောလက်တွေ့ထုတ်ကုန်များအတွက် anti-cloning market, စျေးကွက်ရှိ MF ကဒ်များကိုလွယ်ကူစွာကူးယူနိုင်ခြင်း၏ချို့ယွင်းချက်များကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းပေးသည်, ဟောင်းသော Access Control Project များအတွက်သင့်လျော်သည်။ IC ကဒ်ပြောင်းမှုကိုပိုမိုလုံခြုံသော CPU ကဒ်သို့ပြောင်းသည်. ကဒ်ဖတ်စက်သည်အကုန်အကျခံစွမ်းဆောင်ရည်၏ထူးခြားချက်များရှိသည်, ခိုင်ခံ့ Anti- ဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်စွမ်းနှင့်တည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်ရည်, နှင့်ကျယ်ပြန့်လက်လှမ်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဖော်ထုတ်ခြင်း၏လယ်ပြင်တွင်အသုံးပြုသည်.
ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောအခြေစိုက်စခန်း RF RF ချစ်ပ်ကိုသုံးပါ
ထိုကဲ့သို့သော anti-static အဖြစ် Multi-protection design ကို, Anti- အမှားဝါယာကြိုး
မြင့်မားသောစီးကူးမှု epoxy ဗဓေလသစ်အထုပ်, အပူ dissipate ရန်လွယ်ကူသည်, ကောင်းသောကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်
Access control တက်ရောက်မှု, ဖိုင်စီမံခန့်ခွဲမှု, အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်တွေ, ထုတ်ကုန် Anti- အတု, ဘတ်စ်ကားကဒ်, ခိုးယူမှု, ကင်းထောက်, တစ်ခုကဒ်ဖြေရှင်းချက်, စားသုံးသူစနစ်များနှင့်အခြားရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းဖော်ထုတ်ခြင်း applications များ.
သင်၏ထုတ်ကုန် Access Control CPU Card Reader ကိုကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားပါသည်, anti-ကိုယ်ပွား CPU ကိုကတ် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို
prev: Anti-passback နှင့်အတူ ID ကိုကတ်ဝင်ပေါက်ထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို, ထုံးစံကို TCP / IP ကို, RS232, RS485 Interface
Mini Access Control IC ID Card Reader, သေးငယ်သော Access Control Reader, သတ္တုရေစိုခံ Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို
RFID ဆကျကပျ Tag ကို (86)
အခြားအ Dedicated Tag ကို (28)